D Ribose Tablets And Powder | Mega Planet Co., Ltd
D Ribose Tablets And Powder
D-Ribose Tablets and Powder
Item #01473 • 100 vegetarian tablets
Item #00972 • Net Wt. 150 g (0.33 lb. or 5.29 oz.)
Many people striving for peak performance — or just concerned about heart health in general — are unaware that depletion of cellular energy in heart and muscle tissue can affect normal daily function.
The primary energy source for all cellular processes isamolecule known as ATP (adenosine triphosphate). Healthy, active cells constantly replenish their supply of ATP to produce vital cellular energy. However, under conditions of strenuous exercise, stress, or aging, critical body tissues such as heart and skeletal muscles may not replenish ATP as quickly.
D-ribose,acarbohydrate molecule found in every living organism, facilitates the production of ATP.1 In studies of healthy athletes, supplying fatigued muscle cells with D-ribose quickly restored ATP levels to normal.2-4
D-Ribose Tablets and D-Ribose Powder can help speed energy recovery, increase energy reserves, and maintain youthful energy levels in heart and muscle tissue.
For healthy adults seeking to optimize their physical performance or simply restore everyday energy and strength, the recommended daily dose of five tablets of D-Ribose Tablets taken with food supplies 5,100 mg of patented Bioenergy RIBOSE®,apremium patented brand of ribose studied in many clinical trials and recommended by leading cardiologists.
For adults seeking maximum energy support for heart and muscle tissues, the recommended dose is one scoop of D-Ribose Powder taken twice daily. Each one scoop serving supplies 5,000 mg of Bioenergy RIBOSE®. D-Ribose Powder can also be taken in one 5,000 mg dose just before exercise and another 5,000 mg dose just after exercise.
Specific to #01473
Five vegetarian tablets contain:
Bioenergy RIBOSE® (Non-GMO D-Ribose) 5100 mg
Specific to #00972
One scoop (approx. 5000 mg) contains:
Bioenergy RIBOSE® (Non-GMO D-Ribose) 85000 mg
Take one level scoop once or twice daily with food to support cardiovascular health and energy levels in working muscles, or as recommended byahealthcare practitioner. For alternative dosing, take one scoop before and after exercise. D-Ribose hasanatural mildly sweet taste and can be mixed with liquid or into hot or cold food. D-Ribose can be used asasweetener. Continued use is necessary to maintain the benefits of D-Ribose Powder.
Caution : Because this product may lower blood glucose, consult your healthcare provider before taking this product if you are taking glucose lowering medication.
EMBO Rep. 2006 Mar;7(3):276-82.
J Surg Res. 1989 Feb;46(2):157-62.
သင်မှလိုအပ်မည့် D-Ribose Tablets and Powder
အထွတ်အထိပ်လုပ်ဆောင်ချက်များပြုလုပ်သည့်လူအများစုသည် (သို့) ယေဘုယျနှလုံးကျန်းမာရေးကိုလိုအပ်သူများသည် နှလုံးနှင့် ကြွက်သား တစ်ရှူးများ အတွင်းရှိ cellular energy ကုန်ခမ်းမှုကို သတိမထားမိကြပေ။
Cellular process အားလုံးအတွက် ပင်မစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ATP ခေါ်သည့် molecule (adenosine triphosphate) တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမည်သို့ဆိုစေ ပြင်းထန် သည့်အားကစား၊ ဖိအားလုပ်ငန်း (သို့) အရွယ်အိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်များအတွင်း နှလုံးနှင့် ကျောရိုးမကြီးကြွက်သားကဲ့သို့အရေးကြီးခန္ဒာတစ်ရှူးများသည် ATP အား လျင်မြန်စွာပြန်ဖြည့်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သက်ရှိဖြစ်စဉ်များအတွင်း တွေ့ရှိရသည့် carbohydrate molecule တစ်ခုဖြစ်သည့် D-Ribose သည် ATP အားကူညီထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အားကစားသမား များအပေါ်လေ့လာချက်များအရ နွမ်းနယ်သည့်ဆဲလ်များကို D-Riboseဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန်အဆင့်ATP ကို လျင်မြန်စွာပြန်လည်ရစေနိုင်သည်။
D-Ribose Tablets ဆေးပြား and D-Ribose Powder ဆေးမှုန့်သည် စွမ်းအင်ပြန်လည်ရရှိမှု၊ စွမ်းအင်တိုးမြှင့်ရန်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် နုပျိုသည့် နှလုံးနှင့် ကြွက်သားတစ်ရှူးများအတွင်းရှိ စွမ်းအင်အဆင့်များကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
ထိပ်တန်းနှလုံးအထူကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ လေ့လာချက်နှင့်အကြံပြုချက်များအရ မူပိုင်ခွင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် ribose အာမခံချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် အစား အစာနှင့် မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့် Bioenergy Ribose 5100mg အားဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ရုပ်ပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်လိုသည့် ကျန်းမာသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် နေ့စဉ်စွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအားကို ရိုးရှင်းစွာ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
နှလုံးနှင့် ကြွက်သားများအတွက် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်လိုအပ်နေသည့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အကြံပြုထားသည့် D-Ribose Powderအား နေ့စဉ်ထမ်းစားဇွန်းအပြည့် (၂)ကြိမ်မှီဝဲရန်။ ဆေးတစ်ဇွန်းတိုင်းတွင် 5000 mg of Bioenergy Ribose ပါဝင်သည်။ အားကစားမလုပ်မီD-Ribose Powder 5000mgနှင့် နောက်ထပ် 5000mg ကို အားကစားလုပ်ပြီးနောက် မှီဝဲနိုင်သည်။
Item # 01473 သတ်မှတ်ချက်များ
နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးနှင့် ကြွက်သားလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် စွမ်းအင်အဆင့်များအတွက် နေ့စဉ် အစာစားပြိးတိုင်း (၁)တောင့်မှီဝဲရန် (သို့) ဆရာ ဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမှီဝဲရန်။ ယေဘုယျကျန်းမာရေးအတွက် အပြောင်းအလဲမှီဝဲမှုအတွက်နေ့စဉ်တစ်တောင့်မှီဝဲရန်။ D-Ribose Tablet များ၏ အကျိုးကျေးဇူးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အဆက်မပြတ်မှီဝဲရမည်။
Item # 00972 သတ်မှတ်ချက်များ
နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးနှင့် ကြွက်သားလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် စွမ်းအင်အဆင့်များအတွက် စွမ်းနေ့စဉ်ထမ်းစားပြီးတိုင်း ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း (၂)ကြိမ်မှီဝဲရန်(သို့) ဆရာ ဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမှီဝဲရန်။ အပြောင်းအလဲမှီဝဲမှုအတွက် အားကစားမလုပ်မီနှင့် လုပ်အပြီးတွင် (၁)ဇွန်းစီမှီဝဲပါ။ D-Riboseသည် သဘာဝအားဖြင့် နူးညံ့စွာချိုသည့်အရသာရှိ၍ အရည်(သို့) အပူအအေးစာများအတွင်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။ D-Riboseအား အချိုဓာတ်အဖြစ် အသုံးပြုကြပြိး D-Ribose Powder အကျိုးကျေးဇူးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အဆက်မပြတ်မှီဝဲရမည်။
သတိပြုရန် : ဤဆေးသည် blood glucose နိမ့်ပါးသောကြောင့် အကယ်၍ သင်သည် glucose လျော့ချသည့်ဆေးဝါးများမှီဝဲနေလျင် ဤဆေးမမှီဝဲမီ သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါရန်။